Vondrona Mpianatra ao Japana Manao Izay Mampahafinaritra Ny Fanaovana Hetsi-Panoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2016 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, čeština , English
Ity lahatsoratra avy amin'i Naomy Gingold ity niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 27 May 2016, ary navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty-.
Hoan'ny vao manomboka, nisy ny fahabangan'ny vaovao azo inoana avy amin'ny governemanta momba ny zava-mitranga. Ary nanambara ny governemanta elatra havanan'ny Praiminisitra Shinzo Abe fa hiverina hiodina indray ny milina nokleary. Avy eo nisy lalàna vaovao “tsiambaratelom-panjakana” mampangina ny mpanao gazety, izay antony iray fototra nahatonga an'i Japana nidina avy any amin'ny firenena voalohany indrindra nankany amin'ny laharana faha 72.tao amin'ny filaharan'ny Fahalalahan-gazety Manerantany taona 2016.
Nefa hoy i Okuda hoe na dia mety tsy miteny aza ny olona, dia misy ny olona izay mieritreritra politika, anisan'izany ny vondrony – SEALDs – Students Emergency Action for a Liberal Democracy na Hetsika Maika Ataon'ny Mpianatra Manohana ny Demokrasia Liberaly.
Lasa toy ny kintan'ny rock ao Japana amin'ny ankapobeny ny SEALDs — sy Okuda, indrindra indrindra —. Nanao antsafa maro isan'andro i Okuda, ary niteny tany amin'ny lanonana isankarazany. Misy ny votoaty fanadihadiana vao nivoaka. Eo am-panoratana boky roa ihany koa izy, ny anankiray nataony manokana, ny iray niarahany tamin'ny mpikambana hafa tao amin'ny SEALDs. Manana mpanjohy 28.900 i Okuda ao amin'ny Twitter.
Hita eo amin'ny fonon'ny gazety lamaody sy kolontsaina Japoney ihany koa ny mpikambana ao amin'ny SEALDs. Tany am-piandohan'ity taona ity, niseho niaraka tamin'ny Rolling Stone i Okuda sy ny iray amin'ireo vehivavy malaza maro ao anatin'ny SEALDs . Ary noho ny fifidianana atsy ho atsy, efa miara-miasa amin'ny marika lamaody malaza ny SEALDs; Nipongatra ao amin'ny iray amin'ireo departemantam-pivarotana malaza indrindra ao Tokyo ny tsipika “Don’t Trash Your Vote” na “Aza ariariam-poana ny latsa-batonao ” ijoroan'izy ireo.